> Resource > Android > LG Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop LG
Waxaan ka Laptop LG soo ceshano kartaa Data?
Qof ii sheegi kartaa sida inuu ka soo kabsado fayl lumay ka laptop LG? My saaxiib si qalad ah la tirtiro gal ka laptop LG, iyo nasiib daro waxaa jiray sawirro badan oo qaali ah ku gal in. Run ahaantii waxaan u baahan tahay. Fadlan iga caawiya si aad u hesho dib ka laptop LG sawirada lumay.
Isdeji. Faylal ay ku folder aad tirtiray waa uun geli ku wadid aad LG laptop ee adag. Suurtogal tahay in aad iyaga u soo ceshano kartaa haddii aad leedahay xal ku habboon. Laakiin fadlan ogsoonow in xogta mar oo cusub ku laptop LG overwrites faylasha aad tirtiray, ma waxaad hanato karo. Sidaas joojiso isticmaalka aad laptop LG oo heli barnaamijka xogta LG ah ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan.
Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery haddii aad rabto in aad xal kaamil ah oo khatar la'aan inuu ka soo kabsado xogta ka laptop LG. No files arrinta ku saabsan laptop LG lumeen sababtoo ah ula kac ah ama shil tirtirka, formatting, Baadi xijaab ama nidaamka, qalab ka buuxsada iyaga dib u soo ceshano karo. Waa ay awoodaan in ay dib u hanato noocyo badan oo nooc file ka LG laptop, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, emails, waraaqaha xafiiska, files audio, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ay u bilaabaan LG kabashada xogta laptop hadda!
Qabtaan LG Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada dib u soo ceshano xogta ka laptop LG ah
Ka hor inta aanan bilaabin, fadlan abuurtaan Data Wondershare Ladnaansho on Risaalo ka mid ah in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Kadib markii ay barnaamijka aad laptop LG, waxaa lagu siin doonaa 3 kabashada hababka: "File lumay Ladnaansho", "Recovery ah Barzakh," iyo "File ceeriin Ladnaansho".
Halkan aynu dooro "lumay Recovery File" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 xijaab Scan ama drive adag tahay in la raadiyo xog la waayay
Hadda kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo ka faylasha aad lumeen oo guji "Start" si ay u bilaabaan u baar.
Haddii xogta aad la tirtiray sababtoo ah formatting xijaab, fadlan dooro "Enable Deep Scan" furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka laptop LG
Markaasay aad files lumay oo dhan ayaa la soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka dib markii iskaanka. Waxaad ka arki kartaa magacyada asalka file in lagu hubiyo sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad si ay u soo kabsadaan.
All inaad samayso waa si ay u xusaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya aad laptop LG.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan badbaadin xogta soo kabsaday si xijaab kale ee aad laptop LG.
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa Android Devices
Best Android Music Abaabulaha Waxaad u